महामारीमा धनी बन्ने? केही अमेरिकी राजनीतिज्ञको विचार कल्पना मात्रै - China Radio International
महामारीमा धनी बन्ने? केही अमेरिकी राजनीतिज्ञको विचार कल्पना मात्रै
(GMT+08:00) 2020-02-04 18:58:36
हाल चीनले कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीको प्रतिरोध गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि विभिन्न तरीकामार्फत चीनलाई समर्थन र मद्दत दिएको छ। तर केहीले महामारीको प्रतिरोधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हस्तक्षेप गरेका छन्। जस्तै भनौं अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रोसले हाल चीनको महामारीका बेला उत्पादन व्यवसाय अमेरिकातर्फ हस्तान्तरण गर्नु हितकर भएको कुरा बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाजले उनको भनाइको निन्दा गरेको छ।
महामारी मानवको सामु देखापरेको साझा चुनौती हो। हाल चीन सरकारले सबैभन्दा चौतर्फी र सबैभन्दा गम्भीर प्रतिरोध र नियन्त्रणका कदम चालेको छ। चीनले ती कदम चाल्नुको उद्देश्य चिनियाँ जनताको संरक्षण गर्नुका साथै विश्वका जनताको संरक्षण गर्नु हो।
विश्वको एक मात्रै अति ठूला मुलुकको रुपमा अमेरिकाले हालसम्म चीनलाई कुनै पनि वस्तुगत मद्दत दिएको छैन। तर अमेरिकाले चिनियाँ नागरिकलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने कदम चालेको छ।
हालको महामारीबाट चीनको अर्थतन्त्रमा असर परेको तर असर अस्थायी हो। चीनको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन राम्रो दिशातर्फ विकास हुने अवस्थामा परिवर्तन हुने छैन। सन् २०२० फेब्रुअरी दुई तारिखसम्म चीनमा रहेका १८८ वटा विदेशी उद्योग-व्यवसायले महामारीको प्रतिरोधका लागि १ अर्ब ९ खर्ब ६० लाख चिनियाँ युआन चन्दा दिइसकेका छन्। यसबाट विदेशी उद्योग-व्यवसायले चीनसँग हालको कठिनाइको संयुक्त रुपमा सामना गरेको र चीनको भावी विकासप्रति आशावादी भएको कुरा प्रतिविम्वित भएको छ।